“Naga Caawiya Sidaan Taleex Cadawga Uga Difaacan lahayn” (Dhageyso) – make music movie Edition: International | Video
Published On: 4 July 2012 11:04 pm Wararka | By Taleex Media “Naga Caawiya Sidaan Taleex Cadawga Uga Difaacan lahayn” (Dhageyso)
Cali Khaliif Galaydh oo saaka ka hadlayay shir dhinaca taleefanka ah oo soo abaabuleen taageerayaasha mashruuca Khaatumo ayaa shaaca ka qaaday in la isu diyaariyo sidii la isaga difaaci lahaa waxa uu ugu yeedhay “cadawgeena koowaad” oo duulaan ku soo ah Taleex.
Galaydh ayaa sheegay in wada dhalashada beelaha Dhulbahante iyo Majeerteen dadka qaar lagu beer la xawsado balse xaqiidu tahay ayuu yidhi cadawgeenu waa Gaalkacyo iyo Garowe.
“Ma moogin in aan wada dhalanay laakin dadka aan aniga ugu horeeyo waxaan qabnaa in cadawgeena koowaad yahay dadka ku nool Gaalkacyo iyo Garowe” ayuu yidhi Galaydh.
Shirka oo ahaa mid ka duwan kuwii horay loogu yaqiinay Khaatumo ee la qaban jiray maalmaha fasaxa gaalada sida Sabtida iyo Axada ayaa lagu sheegay in uu yahay mid deg deg ah oo lagaga arinsanayo xaalada cusub oo ku soo korodhay taageerayaasha Galaydh.
Hase ahaate shirka ayaa ujeedadad nuxurkiisu ahayd hab cusub oo lagaga doonayo dhaqaalo dadka quluubtu madawdahay ee maalin waliba dhaqaalaha lagaga gurto wax aan jirin.
Galaydh waxaa uu u sheegay taageerayaashiisa in magaalada Taleex ay duulaan ku soo yahay maamulka Puntland gaar ahaan kuwa uu ku sheegay in ay la shaqeeyaan cadawga oo ka soo jeeda degmada Taleex.
Intii uu hadlaka waday Galaydh marna kama uusan hadal in Laascaanood cadaw haysto sidoo kalana kama uusan hadal in Buuhoodle cadaw dul fadhiyo sidoo kalana kama uusan hadal in Xuddun cadaw soo dul fadhiistay toodbaadkan ka dib weerarkii ay reer miyiga ku laayeen kooxda Khaatumo.
Dhinaca kale waxaa isna ka hadlay shirkaasi Cabdikariin Xasan Jaamac oo sheegay in siyaasada Soomaaliya ee Muqdisho taalo ay xiligan ku jiifto Khaatumo balse loo baahan yahay ayuu yidhi samir iyo dulqaad guul darana la filo.
Shirkii Saaka oo dadka ka soo qabay galay u badnaayeen Waqooyiga Ameerika qurbjoogta ku nool ayaa sidoo kale waxaa daba yaalay mid kale oo caawa loo qabtay dadka ku nool dalalka Yurub iyo Afrika.
Taleex Media waxaa ay macamiisheeda halkan ugu soo gudbinaysaa dhamaan shirarkii taleefanada ee ay qabteen kooxda Khaatumo kuwaaso dhamaantood nuxurkoodu yahay “keena Lacag” xili dadka Khaatumo samaystay ay gacanta ku hayaan hantidii qaranka Soomaaliyeed iygoo gacansiyo waaweyn ku leh bariga Afrika.
Codadkan aan halkan ku soo bandhigayno waxaa ku jiro kuwa xasaasi ah sida:
Garaad Aflagaadaynay qaar ka mid ah beelaha uu isimka u yihiin
Garaad leh waxaad tihiin mishiinkii aan maalaynay ee lacag keena.
Siyaasi leh Laascaanood dadkii lahaa ayaa haysta yaa laga xoraynayaa
Haween Afladaynaya beelo Dhulbahante ah
Aqoon yahayn leh Cid aan aniga warqad siin Xildhibaan noqon mayso
maalqabeen islaan cayr qaadata Dhaqaalo weydiisanaya.
iyo Arimo badan oo kale kuwaaso kaa yaabin doona marka aad dhagaysato.
Halkan ka roggo si aad u dhagaysato shirar taleefan oo ay Taleex Media uruurisay biloouyinkii la soo dhaafay.